Kunamata Kunongedzera Kupesana Nekukanganisa | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Munyengetero Kunamata Kunongedzera Kupokana Nekukanganisa
Nhasi tichave tichizvibata isu mumunamato zvinongedzo kurwisa kukanganiswa. Kukanganisa chinhu chinotyisa chemuvengi kuita kuti murume arasikirwe nekutarisa kwechinangwa chavo mukutsvaga kubudirira. Kune vanhu vazhinji kwazvo vakafanirwa kubudirira muhupenyu vasingazokwanise kuita zvavanogona nekuti chimwe chezvigumbuso zvinoiswa nemuvengi munzira yavo kutsausa. Chinhu chinonakidza ndechekuti kazhinji, vanhu havazokwanisa kuona zvinovhiringidza kana vakasangana neimwe nekuti kazhinji, kukanganisa kunogona kuuya nenzira yezvinodiwa panguva iyoyo.
Mudzimai wemukadzi waPotifari aive akakanganisa kuvhiringidza muhupenyu hwaJosefa. Dai Josefa asina kuita kuedza kwekuzviuraya, pane mukana wekuti angadai asina kukwanisa kuzadzikisa izvo zvakamumisirwa. Zvichakadaro, panguva iyoyo, Joseph aigona kusarudza kutamba kune mimhanzi yemukadzi waPotifari nekuti aigona kuvimbisa kuchengetedzeka kwake uye kunyange kuita kuti kukwidziridzwa kwake kuve mudzimai watenzi wake Zvisinei, Joseph akakwanisa kuona kuti chaive chisiri chikamu chehurongwa hwaMwari pahupenyu hwake, saka akabva atanga kuzvitsitsinho zvake.
Nepo Joseph akabudirira kukurira kukanganiswa kwakaiswa munzira yake nemuvengi, pane mumwe munhu muBhaibheri uyo aisakwanisa kukunda zvinokanganisa. Isau aigona kunge akatarisisa kushomeka kwekuda kwedumbu rake uye akatarisa kuti ave murume mukuru, asi nzara yake, yaive chinhu chakakanganisa hupenyu hwake, yakamukurira, uye akawira pasi. Pakarepo ipapo uye ipapo, akachinjanisa hudangwe hwake nehari yehuku.
Kukunda kukanganiswa, inobata nekuzvizivisa kuburikidza nesimba rekuziva uye nerubatsiro rweMweya Mutsvene uye zvakare kuranga. Dai Jacob asina kuzviranga, angadai akawira pachifuva chemukadzi watenzi wake, uye izvo zvingadai zvakakanganisa zvirongwa zvaMwari zveupenyu hwake. Saizvozvo, muhupenyu hwedu, pane akati wandei nguva atinosangana nezvinotsausa, kungave kukundikana pabasa kana pakudzidza, chingave chero chinhu, vangave vakadzi kana vamwe varume vakasiyana vanouya kwatiri, isu tinofanirwa kuvaziva uye bata navo. Ndinonamata kuti mweya waMwari uyo unotibatsira kuziva kutsauka kana tikasangana nemumwe wauya pamusoro pedu izvozvi muzita raJesu. Paunenge uchitanga kudzidza munamato uyu zvinongedzo zvinopesana nekukanganiswa, dai Mwari vatumira zvinovhiringidza kure kure nenzira yako muzita raJesu.
Ishe, ndinouya kuzorwa nemasimba ese ekukanganisa munzira yangu yekubudirira uye kubudirira. Ndinonamata kuti muvaparadze muzita raJesu. Mhando dzose dzezvigumbuso pandiri munzira yekubuda, ndinonamata kuti moto wemuNzvimbo Tsvene uvapise nemuzita raJesu.
Ishe Mwari, ndinonamata kuti netsitsi dzenyu, mundipe huchenjeri hwekuona kukanganisa kana ndawana imwe. Kunyangwe zvaitaridzika kunge zvandaida kurarama panguva iyoyo, ndinonamata kuti iwe undipe huchenjeri hwekuzviona sekukanganisa uye kuzvibata saizvozvo muzita raJesu.
Ishe Mwari, sekubatsira kwamakaita Joseph mukukunda kukanganiswa parwendo rwake rurefu kuenda pakubwinya, ndinonamata kuti nenzira imwecheteyo, iwe ubatsire mukukunda kukanganiswa kwese munzira yangu muzita raJesu. Nzira dzese dzekukanganisa munzira yangu dzakaparadzwa nemoto muzita raJesu.
Wese mumiriri wekukanganisa munzira yangu anowira kurufu muzita raJesu. Wese murume nemukadzi zvinonditadzisa kuva zvawakandirongera kuti ndive, ndinonamata kuti iwe utikonzere kuti tisa.sangana muzita raJesu. Ndinoparadza nemoto hurongwa hwese hwemhandu pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Bhuku raVaKorinde 10: 13 Hapana muedzo wakakubata iwe usingawanzoitika kumunhu. Mwari akatendeka, uye haatenderi kuti muedzwe kupfuura pamunogona napo, asi nemuedzo, iye achakupaiwo nzira yekutiza, kuti mugone kuutsungirira. Ndinonamata kuti parege kuva nemuedzo unondikunda muzita raJesu. Ndinonamata kuti mundipe simba rekukunda chero muyedzo ungangouya pandiri kusvika pakubudirira muzita raJesu.
Ini ndinopesana nepfungwa dzose dzekunwa kana kuputa muzita raJesu. Zano roga roga uye zvirongwa zvemuvengi zvekundikanganisa nekushandisa zvinodhaka, kunwa doro, kana kuputa fodya. Mhando dzese dzehupombwe idhiabhorosi dzaanoda kuisa pandiri kuti dzinditsause. Ndinonamata kuti Mwari vaparadze marongero akadaro muzita raJesu.
Chinyorwa cha1 Vakorinde 10:12 Saka, kana uchifunga kuti wakamira wakasimba, chenjera kuti urege kuwa! Ndinonamata kuti mundipe nyasha yekumira nemi kusvika kumagumo muzita raJesu. Museve wega wekutsauswa wakapfurwa kwandiri nemuvengi kuti ndiwire pasi pamberi pako kuti miseve yakadaro iparadzwe nezita raJesu.
Ishe, ndinoraira kubva ikozvino, ndinotarisa pamuchinjikwa, ndinozviisa pasi pekudzidziswa neMweya Mutsvene. Ndinonamata kuti mweya waMwari, mweya woumwari, utange kunditungamira uye kunditungamira. Izvo zvinondidzidzisa zvinhu zvekuita uye kundiratidza kwandiri zvinhu zvinouya. Ndinonamata kuti mweya waMwari uve wakatanhamara muhupenyu hwangu muzita raJesu.
Baba, ndinofungisisa nzira yetsoka dzangu pamberi penyu kuti nzira yangu igotwasuka uye isununguke kubva kune zvakaipa nekukanganiswa nemuvengi muzita raJesu. Ndinofambisa tsoka dzangu kubva kuchitadzo kuti ndirege kuwira mumadhiyabhorosi nemuzita raJesu.
minamato inonongedza kukanganiswa
Previous nyayaKunamata Kunongedzera Kupokana Kunonoka MuKubata
inoteveraKunamata Kunongedzera Kurwisa Kuora Mwoyo
Godspower Daniel Mbudzi 17, 2020 At 11:08 am
Izvi zvakanaka uye zvinotyisa. Mwari varopafadze uye vakusimudzire kubva kumativi ese muzita raJesu amen uye ameni
NEMUNYENGETI WENYAYA yeKENYA
30 Munamato for Supernatural Turnaround